ဤစာအုပ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းတခုတခုအပေါ်မှာတစ်ခုလုံးကိုအခနျးကွီးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်တစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပါတယ်။ အတော်လေးရိုးရှင်းစွာဤစာအုပ်ကအများကြီးအံ့သြဖွယ်လူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ရက်ရက်ရောရောထောက်ခံမှုများအတွက်မဟုတ်ကြမတည်ရှိလိမ့်မယ်။ သည်ကျွန်မအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။
လူအတော်များများသည်ဤအခန်းကြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကြောင်းတုံ့ပြန်ချက်ထောက်ပံ့ခြင်းသို့မဟုတ်စာအုပ်အကြောင်းငါနှင့်အတူစကားပြောဆိုချက်တွေကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ငါ Solon Baracas, တွမ် Boellstorff, Clark က Bernier မိုက်ကယ် Bernstein, Megan Blanchard ဖြစ်ပြီး, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen ကမြန် Ethan, Nick Feamster, Cybelle Fox က, မဂ္ဂီ Frye, Sharad Goel, Jake ဟော့ဖ်မန်း, ဂျို Huey မှကျေးဇူးတင်တယ် ပက်ထရစ် Ishizuka, ဘင်ဂျုံးစ်, Dawn Koffman, ဆာရှာ Killewald, Harrissa Lamothe, Andre Lajous, ဒါဝိဒ် Lee က, မေီ Lerman, Meagan Levinson, အင်ဒရူး Ledford, ဒိုင်လီ, ကရင် Levy, မှ Ian Lundberg, Xiao Ma, အင်ဒရူးမော်စီတုန်း, ယောဟန်ကိုလေဝိအမျိုးမာတင်, Judy Miller က, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, နီကိုးလ် Pangborn, ရိုင်ယန် Parsons, Devah ပေဂျာ, Arnout ဗန်က de Rijt, ဒါဝိဒ်သည် Rothschild ဘီလ် Salganik, လော်ရာ Salganik, ခရစ်ယာန် Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart ကမိုက်ကယ် Szell, Sean တေလာ, Florencia မီးရှုးတိုင်, Rajan တို့ Vaish, တေလာ Winfield, ဟန် Zhang ကနှင့်ဆီမှ Zhang က။ ငါသည်လည်းလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အစောပိုင်းဗားရှင်းကိုဖတ်ရှုများအတွက်နွေဦး 2016 ခုနှစ်တွင်လူမှုဗေဒ 503 အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို, ဤစာအုပ်ထဲတွင်စိတ်ကူးများအများအပြားပုံဖော်ကူညီပေးခဲ့ကြသူနှစ်ပေါင်းများစွာအကြှနျုပျ၏သင်တန်းများအတွက်ကျောင်းသားများလိမ့်မယ်။
ငါဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေး၏လေ့လာမှု Princeton ရဲ့စင်တာအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်တစ်ခုအံ့သြစရာစာအုပ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲခဲ့ရတယ်။ ငါညီလာခံထောက်ခံဘို့ Marcus Prior နှငျ့ Michele Epstein ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါသည်ငါ့စာအုပ်လာအောင်ကူညီပေးပါသူတို့၏အလုပ်များဘဝကနေအချိန်လုယူသောသူသည်သင်တန်းသားများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်: ဧလိရှဗက် Bruch, ပေါလု DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, ကရင် Levy, Mor မန်, Sean တေလာ, Markus မတိုင်မီက Jesse Metcalf, Brandon Stewart က, Duncan က Watts နဲ့ဟန် Zhang က။ ဒါဟာတကယ်အံ့သြဖွယ်သောနေ့ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါနောက်ဆုံးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သို့ကြောင့်အခန်းကနေပညာ၏အချို့သောချန်နယ်နိုင်ခဲ့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အနည်းငယ်အခြားလူများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိထိ​​ုက်ပါတယ်။ Duncan က Watts သည်ငါ့ dissertation အကြံပေးခဲ့နှင့်ကငါ့ကိုသုတေသနဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာသဘောပေါက်ဖန်ဆင်းသောငါ၏ dissertation သုတေသနလုပ်ငန်းရှိ၏ ငါသည်ဤစာအုပ်မတည်ရှိမယ်လို့ဘွဲ့ရကျောင်းခဲ့သောအတှေ့အကွုံမရှိ။ ပေါလုက DiMaggio ဤစာအုပ်ကိုရေးသားဖို့ငါ့ကိုအားပေးဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံး Wallace ခန်းမထဲမှာကော်ဖီစက်ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြ, ငါအခုထိထိုကာလတိုင်အောင်, စာအုပ်ရေးသားခြင်း၏စိတ်ကူးကိုငါ့စိတ်ကိုဖြတ်ကျော်တစ်ခါမျှကြောင်းဖွင့်သတိရစဉ်ကအားလုံးကိုတဦးတည်းမွန်းလွဲပိုင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဤစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့စဉ်ကတစ်ခါတစ်ရံသူ့အကြံပေးချက်ကိုပေါလုကိုကျိန်ဆဲယခုမူကား, ငါတကယ်တော့ပြောလူစိတ်ဝင်စားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့ကွောငျးအကြှနျုပျနားချဖို့ဆိုတာအဘို့သူ့ကိုမှနက်ရှိုင်းစွာကျေးဇူးတင်တယ်။ ငါသည်လည်းနီးပါးအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အစောဆုံးနှင့် messiest ပုံစံများအတွက်အခန်းကြီး၏စာဖတ်ခြင်းအဘို့ကရင် Levy ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်; သူမကိုငါပေါင်းပင်မှာညပ်မိခဲ့သောအခါအကြှနျုပျကြီးတွေရုပ်ပုံမြင်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါငါ့အားများစွာသောအံ့သြဖွယ်နေ့လည်စာကျော်စာအုပ်အတွက်အငြင်းပွားမှုများအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံကူညီမှုအတွက် Arvind Narayanan ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါဘေးတိုက်လွင့်မျောနေသောမှစတင်ပြီးခဲ့လျှင်ပင်, Brandon Stewart ကအမြဲ chat သို့မဟုတ်မျြးအခနျးကွီးမှာကွညျ့ဖို့ပျြောရှငျခဲ့, သူ့အသိအမြင်နှင့်အားပေးစကားရှေ့သို့ရွေ့လျားငါ့ကိုစောင့်လေ၏။ နှင့်အညီ, နောက်ဆုံးတော့ငါက New Haven ၌ဤစာအုပ်အားခေါင်းစဉ်တစ်နေသာမွန်းလွဲပိုင်းနှင့်အတူတက် လာ. ကူညီမှုအတွက် Marissa ရှငျဘုရငျကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ဤစာအုပ်ကိုရေးသားနေချိန်တွင်, ငါသည်သုံးအံ့သြဖွယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပံ့ပိုးမှုကနေအကျိုး။ ပထမဦးစွာ Princeton တက္ကသိုလ်မှာငါနွေးထွေးထောက်ခံယဉ်ကျေးမှုဖန်တီးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းများအတွက်လူမှုဗေဒဌာန၌ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ငါငါ့ကိုလည်းငါကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာကမ္ဘာ့အမြင်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရာအံ့သြဖွယ်ပညာတတ်ဒုတိယအိမ်မှာသက်သေပြဘို့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာမူဝါဒများအတွက်စင်တာကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါ Princeton မှ sabbatical အပေါ်နေစဉ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ဘယ်မှာဤစာစောင်၏ဝေမျှ။ ရှေးဦးစွာငါ 2013-14 ၌ငါ့အိမ်မှာဖြစ်ခြင်းများအတွက် Microsoft ကသုတေသန, နယူးယောက်စီးတီးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဂျနီဖာ Chayes, ဒါဝိဒ်သည် Pennock နှင့်တစ်ခုလုံးကိုကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံပညာအုပ်စုအံ့သြဖွယ်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ရှိကြ၏။ ဒုတိယအချက်မှာငါ 2015-16 ၌ငါ့အိမ်မှာဖြစ်ခြင်းသည်အကော်နဲလ် Tech မှကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒန် Huttenlocher, Mor မန်နှင့်လူမှု Technologies က Lab ကလူတိုင်းငါ့ကိုဤစာအုပ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့အတှကျကော်နဲလ် Tech မှစံပြပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျဤစာအုပ်ဒေတာသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာကနေအိုင်ဒီယာပေါင်းစပ်အကြောင်းပါ, ငါက Microsoft သုတေသနနှင့်ကော်နဲလ်နှစ်ဦးစလုံး Tech မှထင်ပညာတတ် Cross-တ်မှုန်ကူး၏ဤအမျိုးမော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။
ဤစာအုပ်ကိုရေးသားနေစဉ်, ငါလူသုံးယောက်မှမြတ်သောသုတေသနလုပ်ငန်းအကူအညီများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအထူးသဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုအတွက်ဂရပ်များအောင်ကသူ့အကူအညီနဲ့ဘို့, ဟန် Zhang ကကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ငါအထူးသဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုများရေးဆွဲသူမ၏အကူအညီနဲ့ဘို့, Yo-Yo Chen ကကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါအထူးသဖြင့်သူမ၏အကူအညီသတ်ပုံအဘို့, Judy Miller ကမှကျေးဇူးတင်တယ်နှင့်စာကြည့်တိုက်ကနေပစ္စည်းအားလုံးကြင်နာဆင်းခြေရာခံ။
ငါဆွေးနွေးပွဲ၏နံပါတ်မှာဤစာအုပ်ထဲတွင်အတွေးအခေါ်များအပေါ်ထောကျအကူပွုတုံ့ပြန်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကော်နဲလ် Tech မှ Connect မီဒီယာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲစတန်းဖို့ဒ် HCI Colloquium, ဘာကလေလူမှုဗေဒ Colloquium, ကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံအပေါ်စယ် Sage ဖောင်ဒေးရှင်းအလုပ်အဖွဲ့, Princeton DeCamp ၏လေ့လာမှု Princeton စင်တာ: ငါအောက်ပါဖြစ်ရပ်များမှာစီစဉ်သူများနှင့်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Bioethics နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုလူမှုသိပ္ပံဧည့်နာယကစီးရီးအတွက်ကိုလံဘီယာအခြေအနေဘက်စုံလေ့လာမှုနည်းလမ်းများ, ကွန်ပြူတာလူမှုရေးသိပ္ပံ & Data ကိုသိပ္ပံ, ဒေတာနှင့် Society ကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်နယူးလမ်းညွှန်များအပေါ်ကွန်ပျူတာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏သီအိုရီအဘို့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပေါ်လစီနည်းပညာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းစာဖတ်ခြင်းအုပ်စု, Simons Institute မှအဘို့အ Princeton စင်တာ, စက်မှုနှင့်အသုံးချသင်္ချာများအတွက်ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်, လူမှုဗေဒ Colloquium, ကွန်ပျူတာလူမှုရေးသိပ္ပံအပေါ်နိုင်ငံတကာညီလာခံ, Microsoft Research မှာ Data ကိုသိပ္ပံနွေရာသီကျောင်း, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း (Siam) နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး။
ဤစာစောင်၏ဝဘ် version ကိုလုကာ Baker ကပေါလုကို Yuen ကို၎င်း, Agathon Group ၏အလန် Ritari အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဤစီမံကိန်းအပေါ်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်အမြဲတစ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်. အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးအရာတစျခုမှာကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေလေ့လာသင်ယူဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအထူးသဖြင့်လည်းဤစာအုပ်သည်အတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲငါ့ကို git ၏မှောင်မိုက်ထောင့် navigate ကူညီမှုအတွက်လုကျေးဇူးတင်ကြိုက် pandoc နှင့်လုပ်လိမ့်မယ်။
ဤစာအုပ်နှင့်ပူးတှဲပါဝက်ဘ်ဆိုက် open source ဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ , git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-preamble, Hypothesis middleman, Bootstrap, Nokogiri, ကို GNU Make, Vagrant က, Ansible, LaTeX နဲ့ Zotero: ငါအောက်ပါစီမံကိန်းများကိုမှမျှဝေသူကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဤစာအုပ်အားလုံးဂရပ်များ R ကိုဖန်တီးခဲ့ကြ (Team 2016) , အောက်ပါ packages များအသုံးပြု: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , ကား (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , ဇယားကွက် (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) နှင့် emojifont (Yu 2016) ။ ငါငါ့ကိုလည်း pandoc နဲ့စတင်လေကသူ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အဘို့အ Kieran Healy ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ထိုအခါငါသည်သူတို့၏စာတမ်းများအနေဖြင့်ဂရပ်များအချို့ကိုထပ်ဖွဖို့အသုံးပြုဒေတာများကို Arnout ဗန်က de Rijt နှင့်ဒါဝိဒ် Rothschild ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်, ငါသည်သူ၏စက္ကူများအတွက်အများပိုင်ပွားဖိုင်တွေအောင်ဘို့တဲ့ Josh Blumenstock ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
Princeton University ကစာနယ်ဇင်းမှာငါကလက်တွေ့လုပ်ကူညီခဲ့သူကိုအစအဦးမှာဒီစီမံကိနျးတှငျယုံကြည်သောသူအဲရစ် Schwartz နှင့် Meagan Levinson ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ Meagan စာရေးဆရာများနိုင်ကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအယ်ဒီတာရှိ၏ သူမအမြဲဤစီမံကိနျးကိုထောကျပံ့ဖို့ရှိ၏တူငါကောင်းသောကြိမ်နှင့်မကောင်းတဲ့ကာလ၌, ခံစားရတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အခြားသူများအားတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်းကိုရှာဖွေသောအခါ, ယခုငါ Meagan ရဲ့အပြုသဘောဆောင်သတိထားစတိုင်ချန်နယ်, ငါ၏အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်မမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ သင်မကြာခဏသင်ပင်မသိခဲ့ပါကြောင်းနည်းလမ်းတွေအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာဒီစီမံကိန်းကိုထောက်ခံခဲ့ကြပြီ။ ဤစီမံကိန်းနှင့်ပေါ်နှင့်သွားလေ၏စဉ်ငါအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့-အဆုံးသတ်ရေးဘယ်တော့မှထောက်ခံမှုများအတွက်, ငါ့မိဘများကိုကျေးဇူးတင်ဖို့လော်ရာနှင့်ဘီလ်, ငါ့မိဘများ-In-ဥပဒေ, ဂျင်မ်နှင့် Cheryl ချင်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါ၏အလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဧလိနှင့် Theo, သငျသညျအကြှနျုပျစာအုပ်နောက်ဆုံးမှာလက်စသတ်လိမ့်မည်သည့်အခါဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာမေးလျှင်ပါပြီ။ ကောင်းပြီ, အဖြေယခုဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်မရဲ့ဇနီးအမဲန်ဒါကျေးဇူးတင်ချင်တယ်။ ငါသည်ဤစီမံကိန်းကိုအတက်အကျတွေအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသိ, ငါအမြဲသင့်ရဲ့-wavering ဘယ်တော့မှမေတ္တာနှင့်ထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိလိမ့်မည်။